टेलिकमले द्रुत गतिको सेवा उपलब्ध गराउन फोरजी एलटिइ नमस्ते वाईफाई विस्तार गर्ने | Notebazar
काठमाण्डौं । ६माघ, २०७८, बिहीबार / Jan 20, 2022 16:55:pm
नेपाल टेलिकमले एफटीटीएच उपलब्ध नभएका सुगम स्थानहरु र अधिकांश दुर्गम स्थानहरुमा द्रुत गतिको डाटा तथा भ्वाइस सेवा उपलब्ध गराउने फोरजी एलटिइ नमस्ते वाईफाई विस्तार गर्ने भएको छ ।
कम्पनीले फोरजी एलटिइ नमस्ते वाईफाई सेवाका विभिन्न आकर्षक प्याकेजहरु उपलब्ध गराइरहेको छ । कम्पनीले उपलब्ध गराईरहेका यी प्याकेजहरु आवश्यक डिभाइससहित ग्राहकवर्गलाई सहज रुपले प्राप्त होस् भनी नेपाल टेलिकम र साइबरनेटिक्स प्रा.लि.बीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ । माघ ५ गते सम्पन्न सम्झौतामा कम्पनीका प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत संगीता पहाडी र साइबरनेटिक्स प्रा.लि. का सीईओ जेम्स न्याछ्योले हस्ताक्षर गरेका छन ।
फोरजी एलटिइ नमस्ते वाईफाईमार्फत नेपाल टेलिकमले हाल व्यक्तिगत र सरकारी संस्थागत गरी दुई प्रकारका प्याकेजहरु उपलब्ध गराइरहेको छ । व्यक्तिगत प्याकेज अन्तर्गत होम ब्रोडव्यान्ड वेसिक रु. ८०० मा ६० जिबि ३० दिनका लागि उपलब्ध छ । त्यसैगरी १ वर्षका लागि रु. ९००० मा ७२० जिबि प्याक उपलब्ध छ । यसलाई प्रतिमहिना ६० जिबि को दरले १२ महिनासम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ । यी दुवैमा एड अन प्याकको रुपमा रु. ४०० मा १५ दिनका लागि ६० जिबि प्याक लिन सकिन्छ ।
होम ब्रोडब्यान्ड प्रिमियम अन्तर्गत रु. १,२०० मा १२० जिबि प्याक ३० दिनको लागि उपलब्ध हुन्छ । त्यसैगरी १ वर्षका लागि रु. १३,५०० मा १,४४० जिबि प्याक उपलब्ध हुन्छ । यसलाई प्रतिमहिना १२० जिबिको दरले १२ महिनासम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ । यी दुवैमा एड अन प्याकको रुपमा रु. ६०० मा १५ दिनका लागि १२० जिबि प्याक लिन सकिन्छ ।
सरकारी संस्थागत प्याकेजमाा रु. ३,६५० र रु. २,१०० मा ३० दिनका लागि विभिन्न प्रकारका प्याकेजहरु उपलब्ध छन् । यी प्याकेजबाट अनलिमिटेड डाटा चलाउन सकिन्छ । वार्षिक र अर्धवार्षिक रुपमा एकमुष्ट प्याकेज लिने ग्राहकका लागि निश्चित छुटको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल टेलिकमको फोर–जी सेवाका ग्राहक एक करोड बढी 1 hour ago
नेपाल टेलिकमको नाफा साढे ५ अर्ब, साढे ७ प्रतिशतले घट्यो नाफा 11/05/2022
टेलिकमको निर्वाचन अफर वैशाख २५ देखि जेठ ४ गतेसम्म 08/05/2022
नेपाल टेलिकमले राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसका अवसरमा एक साता छुट दिने 01/05/2022
नेपाल टेलिकमले अब इ-सिम उपलब्ध गराउने 28/04/2022
टेलिकमले सदर चिडियाखानाका जनावर तथा पन्छीहरुको एक वर्षको आहारा प्रायोजन गर्ने 24/04/2022
फूलबारीमा टेलिकमको फोरजी टावर सञ्चालनमा 24/04/2022
कम मूल्यमा सबै नेटवर्कमा असीमित कुराकानी गर्न मिल्ने टेलिकमको स्प्रिङ अफर 17/04/2022